Uchwepheshe We-Semalt: I-IoT Futhi I-Botnets Yokubuyisela Futhi Iengozi Ehlobene Nazo
Ama-botnets okuvuselela asetshenziselwa ukwehlisa phansi nokukhomba ezinye izinsizakalo ze-intanethi, njenge-DDOS (Ukusatshalaliswa Kwezinsizakalo Zezinsizakalo). Baphinde bahambise inqwaba yemikhankaso yogaxekile. Ngenxa yokuthi abasebenzisi abawutholi umqondo uma ama-botnets omvuni ehlasela amakhompyutha awo, kulula kubagaxekile ukweba idatha yakho yomuntu siqu esetshenziselwa ukukhwabanisa kwe-identity.
U-Nik Chaykovskiy, i-10 (Semalt uMenenja weNtuthuko yeMakhasimende, uchaza ukuthi into embi kunazo zonke ama-cybercriminals enza ama-botnets futhi athengise kubathengi be-intanethi. Bese basebenzisa ama-botnets ngamanye ama-cybercrime emhlabeni wonke. I-botnets ye-Io iqoqa amadivaysi athembekile, kufaka phakathi ama-routers, i-DVR, amakhamera, amadivaysi agqoke kanye nobuchwepheshe obuningi obufakiwe. It ikakhulukazi igciwane ngamagciwane futhi ivumela abahlaseli ukulawula futhi benze imisebenzi ehlukene kokubili ungaxhunywanga futhi online. Wonke amadivayisi we-IoT anezinketho zokuvikeleka ezimpofu nezici ezinjengezibikezelo ezingalindelekile, ukungena kokungena kwe-admin kanye namachweba okwabelwana ngawo ukufinyelela okukude. Abahlaseli bahlehlisa ikakhulukazi amadivaysi ngokusebenzisa ukungena okunamandla futhi bajobe i-malware ehlukene ngamachweba avulekile noma izinsizakalo ezisengozini.
Indlela ongayithola uma i-PC yakho iyingxenye ye-IOT noma ama-botnets wokuvuna
Kulula ukuthola ukuthi ikhompyutha yakho ingxenyeni ye-botnet futhi ungahlola futhi umthelela wayo ekusebenzeni kwedivayisi yakho. Uma ikhompyutha iba yingxenye ye-botnet, isebenza kancane kancane futhi ayihambisani nemilayezo yakho. Ngaphezu kwalokho, amawebhusayithi awalayishi kahle, futhi izinhlelo zakho zokusebenza zigcwele ngokweqile nemibuzo eminingi.
Lezi zinhlayiya zisebenza kanjani?
I-botnets ne-ITT abavuni bayalawa ukwenza imisebenzi ethile. Ngokuyinhloko banesibopho sokuba ulwazi lomuntu siqu njengamininingwane yekhadi lesikweletu futhi angeke kubonakale kubasebenzisi ngenxa yokuziphatha kwabo okuthula. Abahlaseli abaziwa ngokuthi ama-botmasters bawasebenzisa kakhulu lezi zinhlayiya. Amaseva womyalo kanye nokulawula ahloselwe ukwehlisa phansi amabhodlela.
Lezi zingozi ezilandelayo zihambisana nalezi zinhlayiya.
1. Zizenza sengathi zivumelekile futhi zikubandakanye emisebenzini esolisayo:
Izingozi ezihambisana ne-botnets zifana nezingozi zezinhlelo ezinonya nezenzo ezisolisayo kwi-intanethi. Ngokwesibonelo, ama-botnets aklanyelwe ukweba ulwazi lwakho lomuntu siqu futhi afinyelele imininingwane yakho yekhadi lesikweletu. Futhi bathola ukufinyelela kwezakhiwo zakho zobuhlakani, amacebo, namaphasiwedi futhi ngezinye izikhathi bakucindezela ukuthi uchofoze izixhumanisi zabo ukuya kumawebhusayithi axhumano. Kufanele uqonde ukuthi uma ikhompyutha yakho isulelekile, ngeke isasebenza njengezidingo zakho kodwa izokwenza imisebenzi eyabelwe i-hacker.
2. Ayikho umugqa phakathi kwekhompyutha yomuntu siqu neyenkampani namadivayisi weselula:
Umkhawulo phakathi kwamakhompyutha ezinkampani nezomuntu uqobo. Sonke singaba yisisulu se-botnet malware, futhi indlela kuphela yokuziqeda ukufaka izinhlelo zokulwa ne-malware. Ukubona nokuvimba i-malnet ye-botnet yilokho okudingayo ukuqinisekisa ukuphepha kwakho ku-intanethi. Kusukela kumbono wezobuchwepheshe, ama-botnets angagcinwa nezinhlelo zokulwa ne-malware noma i-antivirus. Singayeka ukutheleleka emgwaqeni wenethiwekhi futhi singawachitha ngokushesha.